दम्पतीले विशेष सर्तकता अपनाउनु पर्ने, गर्भको बच्चालाई कसरी स्वस्थ्य र आकर्षक बनाउने ? - ज्ञानविज्ञान
दम्पतीले विशेष सर्तकता अपनाउनु पर्ने, गर्भको बच्चालाई कसरी स्वस्थ्य र आकर्षक बनाउने ?
हुन त गर्भाधान प्रक्रियाबाटै दम्पतीले विशेष सर्तकता अपनाउनुपर्छ वा तयारी गर्नुपर्छ भनिन्छ । जब हामी बच्चा जन्माउने योजना तय गरेर शारीरिक क्रिया गर्छौं, त्यही विन्दुदेखि दम्पतीले अनुशासित जीवन अपनाउनुपर्ने मान्यता छ ।
किनभने दम्पतीले गर्ने कतिपय गल्तीले गर्भको बच्चालाई असर गर्छ । नतिजा, बच्चा जन्मजात कुनै शारीरिक विकार बोकेर आउँछ । त्यही विकारले ति बच्चालाई जीवनभर सताउँछ । उसले पूर्ण स्वस्थ्य जीवन विताउन सक्दैन ।
श्रीमती जब गर्भवती हुन्छे, श्रीमान्ले आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्छ । श्रीमतीको गर्भबाट जन्म लिने बच्चा दुबैको हो । त्यसमा दुबैको समान हक लाग्छ ।
दुबैले त्यसबाट उत्तिनै सन्तान सुख प्राप्त गर्छन् । तर, गर्भमा बच्चा हुर्काउनुपर्छ महिलाले । प्रसव पीडा सहनुपर्छ महिलाले । ज्यानको बाजी लगाउनुपर्छ महिलाले ।
गर्भवती तनावरहित हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान, प्राणायाम जस्ता विधी पनि उपयोगी हुन्छ । यसका लागि श्रीमान्ले प्रेरित गर्न सक्छन् । गर्भावस्थामा गरिने केही योग आसन र व्यायाम हुन्छन् ।
नियमित व्यायामले गर्भवतीको स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ । यसका साथै खानपान पनि स्वस्थ्य, सन्तुलित, पोषकयुक्त हुनुपर्छ । अप्राकृतिक खानेकुराबाट बच्नुपर्छ । पर्याप्त पानी पिउने, आरम गर्ने, गहिरो निद्रा लिने जस्ता कार्यले पनि गर्भवतीको स्वस्थ्य राम्रो हुन्छ ।
गर्भवती महिलाले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, यस्ता छन्
खानामा हरियो सागसव्जी अण्डा दूध, फलफुल माछा मासु खानु राम्रो हुन्छ । साथै आवश्यक मात्रामा पानी समेत पिउनु राम्रो हुन्छ ।
गर्भअवस्थाको बेलामा जति सकिन्छ पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । नुहाउनका लागि तातो पानी प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ । तातो पानीले तपाईलाई गर्भअवस्थाका बेला हुने दुखाईबाट लड्नसक्ने शक्ति दिन्छ ।
धूमपान र मध्यपानले गर्भवती महिलाको रगतमा हुने आइरनको नास गरिदिन्छ ।आइरनको कमीले गर्दा कतिपय अवस्थामा गर्भवती महिलाहरु शारीरिक रुपमा कमजोर हुन सक्छन भने यसको असर बच्चाको विकास तथा उसको तौलमा समेत पर्नसक्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका रसायनहरूबाट टाढा रहनुहोस्। यी चिजहरूले गर्भको बच्चाको विकास हुन दिँदैनन्। यी चिजहरूलाई नछुनुहोस् र यीनको वरिपरि पनि भरसक नबस्नुहोस्।
यस्ता चिज राखेका भाँडाहरूमा पानी वा खानेकुरा केही नराख्नुहोस्।
तनाबले चिन्तित मात्रै तुल्याउदैन कि गर्भवती अवस्थालाई जटिल बनाउने समेत गर्छ । तनावले गर्भवती महिलाको मात्रै नभई पेटमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत असर गर्छ । त्यसैले यो बाट टाढा रहने ।
गर्भवती अवस्थामा महिलालाई आरामको एकदमै जरुरी हुन्छ तर त्यो संग संगै थोरै कसरतको पनि आवश्यकता पर्दछ ।
कसरतले गर्भवती महिलालाई चुस्त बनाउछ र दुखाई सहने क्षमता समेत बढाउछ । कसरत गर्दा व्यायम प्रशिक्षक तपाईँको साथमा रहन जरुरी छ ।
गर्भधारण गरेको प्रारम्भिक तीन महिना एकदमै सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसबेला चक्कर लाग्नु, थकान महसुष हुनु स्वभाविक हो । सामन्य अवस्था भन्दा केहि गाह्रो हुन सक्छ । खासगरी यस अवधीमा आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि खानपानमा ख्याल गर्नुपर्छ ।
गर्भावस्थामा फलामयुक्त खानेकुराको सेवन गर्नुपर्छ । जब शरीरमा फलामको मात्रा पर्याप्त हुन्छ, रक्तसंचार राम्ररी हुन्छ । त्यसैले गर्भवतीको पहिलो चरणमा फलामयुक्त खानेकुराको आवश्यक्ता हुन्छ, जसले तपाई र गर्भको बच्चामा रक्त संचार र शुद्धि होस् । यसका लागि चुकन्दर, ड्राइ फुड्स, पालक आदिको सेवन गर्नुपर्छ ।
गर्भवती महिलालाई दिनमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दुइ सय देखि तीन सय सम्म थप क्यालोरी आवश्यकता पर्दछ । यो क्यालोरी आमा र गर्भको बच्चा दुबैको लागि आवश्यक हुन्छ ।
एउटा अण्डामा ७० क्यालोरी बराबरको इनर्जी हुन्छ । त्यसैले अण्डाको सेवनले गर्भवतीलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरीको ठूलो हिस्सा आपूर्ति गर्न सक्छ ।
समाजमा धारणा के छ भने गर्भावस्थाको अवस्थामा पेट ठूलो भयो भने ती महिलाले छोरी पाउँछिन् र पेट ठीक्कको भयो भने छोरा । तर विज्ञहरु भने पेटको बच्चाको लिंगको पहिचान लागि पेटको आकारका आधारमा गर्न नसकिने बताउँछन् । पेटको आकार महिला आफ्नै सरीरको आकारका साथै पेटको बच्चाको आकार लगायतका कुरामा निर्भर गर्छ ।
गर्भावस्था महिलाको लागि निकै संवेदनशील अवस्था हो । यो अवस्थामा महिलालाई निकै धेरै स्याहार चाहिन्छ । नयाँ सदस्यलाई घरमा भित्राउने पूर्वतयारी पनि हो यो । गर्भवती महिलालाई सोही कारण घरमा निकै महत्वका साथ स्याहार गरिन्छ । साथीसँगी तथा छिमेकीले समेत विभिन्न खाले सल्लाह दिन्छन् ।
बुढापाका महिलाहरुले समेत विभिन्न खाले सल्लाह दिने गर्छन् । कतिपय त्यस्ता परम्परागत सल्लाहहरु नकारात्मक खालका समेत हुने गर्छन् र त्यसले आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा असर समेत पूराउन सक्छ । जे होस् महिलाले गर्भावस्थाको दौरान धेरै कुरा सुन्नु र भोग्नु पर्छ । गर्भावस्ता सँग केही सत्य तथा केही असत्य तर रोचक धारणाहरु रहेका छन् । जस्तै :
अर्को धारणा के पनि छ भने यदि पेटमा बच्चा भएको बेला महिलाले नूनिलो नमकिन खाने इच्छा गरिन् भनेे बुझ्नुपर्छ की उनको पेटमा छोरा छ । यदि पेटमा छोरी भएमा महिलाले गुलियो कुरा खाने इच्छा गर्छिन् ।
तर यसको पनि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । अर्को रोचक जनविश्वास के छ भने जुन गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा छातिमा जलनको महसुस गर्छिन् उनको पेटमा रहेको बच्चाको टाउकोमा निकै राम्रो कपाल पलाउँछ । तर विज्ञहरुले भने गर्भवती महिलामा छातिको जलनको समस्या सामान्य रहेको र यसको सम्बन्ध बच्चाको कपालसँग नरहेको बताउँछन् ।
कतिपयले गर्भवती महिला उत्तानो परेर सुत्दा गर्भको बच्चालाई असर पुग्छ भन्ने धारणा राख्छन् । तर विज्ञहरुका अनुसार उत्तानो परेर सुत्दा बच्चालाई कुनै असर पुग्दैन । बरु पेट थिचिने गरी घोप्टो परेर चाहीँ सुत्नु हुँदैन ।
धेरै मानिसमा के अन्धविश्वास पनि छ भने गर्भावस्थाको बेला सम्भोग गर्दा गर्भको बच्चालाई असर पुग्छ । तर विज्ञहरुले भने गर्भावस्थामा सेक्स गर्दा गर्भको बच्चालाई असर गर्ने नभै झन रोगबाट बचाउने बताउँछन् ।
गर्भवती महिलाले बढि तातो पानीले नुहाउन हुँदैन भन्ने धारणा छ । यसमा केही सत्यता पनि छ । विज्ञहरुका अनुसार गर्भावस्थामा बढि तातो मात्र नभएर बढि चिसो पानीले पनि नुहाउनु हानिकारक हुन्छ । गर्भावस्थामा महिलाले आफ्नो सरीरको तापक्रम १०२ डिग्री भन्दा तलै राख्नुपर्छ ।
Don't Miss it यसरी खानुपर्छ टिमुर जसले स्वाद बढाउनुका साथै स्वास्थ्यमा पनि फाइदा गर्छ, जानिराखाैँ
Up Next कसरी अपनाउने स्वस्थ जीवनशैली ? अत्यन्तै महत्त्वपुर्ण जानकारी, पढेपछि सेयर गर्नुहाेला
आयुर्वेदिक पद्धति अनुसार खयर अनेक रोगहरूमा उपयोग गरिन्छ। पाचन शक्ति बढाउन र अतिसारलाई निकै फाईदा गर्दछ। घाउ , खटिरा ,…
यदि तपाईंको घरमा कुकुर छ वा कुकुर राख्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको लागि थप खुसीको कुरा छ । घरपालुवा…
दैनिक दिनको २० देखि ३० मिनेट म्युजिक सुन्दा यस्ता फाइदा हुन्छन्
हामी धेरै जसो निन्द्रा नलागेको बेला, अल्छि लागेको बेलामा, काम गर्ने बेलामा, आफ्नो तनाव कम गर्न, मनोरंजनका लागि संगीत सुन्ने…
यस्ता छन हाच्छ्युँ आउने कारणहरु
हाच्छ्युँको गति सय माइल प्रतिघन्टा हुन्छ र यसका साथ करीब एक लाख कीटाणु बाहिर आउँछन। निद्रामा हाच्छ्युँ आउँदैन किनकि सुत्दाखेरी…
दाँत दुखिरहन्छ ? यस्ता छन् दाँत दुखाईबाट बच्ने उपाय
१. तुलसी पत्ताको पेस्ट वा रस लगाउने दाँत दुखाई रोक्न तुलसी निकै प्रभावकारी मानिन्छ । एक मुठी तुलसीको पात टिपेर…